गायक आनन्द कार्की : चप्पल कारखानादेखि दरबारसम्मको यात्रा
संवाददाता : रारा सञ्चार प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७४, आईतवार १२:४२ प्रकाशित मिति : जनवरी 28, 2018
काठमाडौं– गायक आनन्द कार्कीलाई प्रत्यक्ष रुपमा केहीले नचिन्न सक्लान्। तर, उनले गाएका गीत नसुन्ने र नगुन्गुनाउने बिरलै होलान्।
लाग्छ मन हेरी रहूँ, जनम जनम जिउँला सँगै, फेरि तिम्रो याद आयो, तिम्रो रुपको जस्ता थुप्रै गीत अहिले पनि नेपाली संगीतिक आकाशमा उत्तिकै गुञ्जिरहेका छन्।
सोलुखुम्बूमा जन्मिएका कार्की भारतीय लाहुरे बुवासँग सानैमा भारतको लखनउ पुगेका थिए। स्कुले विद्यार्थी हुँदै उनले गायनमा चासो राखे। जुन पछि उनको चिनारी नै बन्यो।
कार्कीका बुवा भने छोरा गीत–संगीतमा भन्दा अध्ययनमा लागोस् भन्ने चाहन्थे। तर, उनले सानै उमेरदेखि आफ्नो भविष्य तय गरिसकेका थिए।
उनले लगनउकै भारतखण्डे संगीत विद्यालयमा आफूलाई प्रशिक्षत गरे। उनी १५ वर्षको हुँदा बुवाको निधन भएपछि उनी झन् बढी दत्तचित्त भएर संगीत साधनामा लागे। यसैको नतिजा हो, आज आनन्द कार्की नेपाली संगीत जगतमा एक स्थापित नाम बनेका छन्।
भारतमै अध्ययन गर्दा विशेष कार्यक्रमका लागि उनी साथीहरुसँग नेपाल आएका थिए। यहाँ उनले नेपालीहरूको माया र सम्मान दुवै पाए। त्यसपछि उनको गन्तव्य मोडियो। उनले आफ्नै देश फर्किने निधो गरे।
त्यो बेला सम्झँदै आनन्द भन्छन्, ‘सायद मलाई भगवानले नेपालकै लागि बनाएका थिए होलान्। म नेपाली मायामा हराउँदै गएको थिए। त्यो बेला नेपाली दर्शक, स्रोता र शुभचिन्तकको आशीर्वादले मैले नेपाललाई छोड्नै सकिनँ।’
लखनउबाट नेपाल आउँदा कार्कीसँग ३ वटा कार्यक्रमको मात्र समय तालिका थियो। तर, उनको गायन र प्रस्तुति सुनेर मन्त्रमुग्ध नेपाली श्रोताको बढ्दो मागपछि उनले लगातार ८–९ वटा कार्र्यक्रम गरे।
बुबा र परिवारका अन्य सदस्यको सोच विपरीत फरक पेशा रोजेका कार्की आफूले यही क्षेत्रलाई अँगाल्नुको कारण’bout भने, ‘गायनभन्दा फरक बाटोका लागि केही प्रयास पनि गरेको थिएँ। काठमाडौंमा साँझ रेस्टुरेन्टमा गाउने कामसँगै दिउँसो काठमाडौंमा आफन्तको चम्पल फ्याक्ट्रीमा काम गरें। तर, त्यहाँ फिटिक्कै मन रमाएन। म टेबल ठटाएर गाउदै बस्थें। साथीहरूले गायनमै लाग् भनेर पठाए।’
एकातिर काम धमाधम, अर्कातिर आम्दानी। हौसला र स्याबासी पनि उत्तिकै। यसैले लोभिएका कार्कीले लखनउ फर्किने कुरै बिर्सिए, उनले नेपालमै बस्ने निधो गरे।
कार्की जतिबेला नेपाल प्रवेश गरेका थिए, उनी हिन्दी गीत मात्र गाउने खुबी राख्थे। त्यो क्षण सम्झँदै उनले भने, ‘मैले गाउने गीत किशोर कुमारको बढी हुन्थ्यो, म किशोर कुमारबाट अत्यन्त प्रभावित थिएँ। यहाँ आउँदा मलाई लागेको थियो, नेपालमा हिन्दी गीत कसले सुनीदेला?’
कार्की बागबजारको बसेरा रेस्टुरेन्ट हुँदै बानेश्वरको एभ्री स्यारेटन होटल एन्ड रेस्टुरेन्टबाट आफ्नो गायन करिअर सुरु भएको स्मरण गर्छन्। ‘होटल र रेस्टुरेन्टमा गाएको चर्चाले मलाई सेनाका कर्नेल–जर्नेलका कार्यक्रम हुँदै दरबारसम्म पुर्यायो। हिन्दी गायनको प्रतिभा मात्र भए पनि राजा, सेना र प्रजाको उत्तिकै माया, साथ र सम्मान पाएँ,’ उनी भन्छन्।
करिअरको निरन्तरताका लागि हिन्दी, त्यसमा पनि अरुका गीत मात्र गाएर आफ्नो पहिचान नबन्ने अनुभव भएपछि उनी २०४२ सालमा रेडियो नेपालमा आफ्नो स्वर परीक्षण गराउन गएका थिए। सहजै पास भए। तर पनि, पहिलो गीत रेकर्डिङका लागि उनले गरेको धैर्यताको कथा निकै रोचक छ।
‘जीवनमा धेरै खोला तर्नु छ’ उनको पहिलो रेकडेर्ड गीत हो। यो गीत रेकर्डिङका लागि रेडियो नेपालमा थुप्रै चक्कर काट्नुपरेको उनी सम्झन्छन्। ‘म निकै डराएको थिएँ। स्टेजमा जति नै आत्मविश्वासका साथ गाए पनि स्टेडियोमा हालत खराब हुन्थ्यो। लाइभ रेकर्डका लागि बस्नु भएका संगीतकर्मीबीच एकसाथ गाउन मलाई गाह्रो महसुस भयो’, पहिलो गीत रेकर्डिङको अनुभव सुनाउँदै गायक कार्कीले भने, ‘गाउनुअघि भगवानको नाम जप्थें। जति डर र त्रासका साथ गीत रेकर्ड गराएँ, उत्तिनै सकस प¥यो रेडियो नेपालबाट आफ्नो गीत सुन्नँ। गीत तयार भयो या भएन, कहिले बज्ला? यो सोध्न थुप्रै पल्ट रेडियो नेपाल पुगें।’
गलाका धनी कर्कीले आफ्नो पहिलो गीत रेकर्डिङसँगै पहिचान बनाउँदै गए। फलस्वरुप आज आइपुग्दा उनले ३ हजारको हाराहारीमा गीत गाइसकेका छन्। गायनका थुप्रै विधामा कार्कीका स्वर चर्चित र सफल छन्। विशेषगरी, प्लेब्याक सिङ्गरका रुपमा उनी स्थापित छन्। उनी भजन, स्वदेश गान, आधुनिक तथा गजल गायनमा पनि उत्तिकै दख्खल राख्छन्।
यागकीसँगै उनले अभिनयको अनुभव पनि सँगालेका छन्। उनले टेलिभिजन विज्ञापन, म्युजिक भिडियो र थुप्रै टेलिसिरियलमा काम गरेका छन्।
६ सयभन्दा बढी नेपाली र हिन्दी फिल्मका प्लेब्याक सिङ्गरका रुपमा रहेका कार्की पछिल्लो समय देश विदेशमा हुने सांगीतिक कार्यक्रम, एकल साँझ र रियालिटी सोका लागि निर्णायकको भूमिकामा व्यस्त छन्।
दुई दर्जन हाराहारीमा एल्बम निकालिसकेका उनी पछिल्लो समय ८ गीत समावेश ‘नबिर्स’ एल्बमको तयारीमा छन् । त्यसपछि नेपाल, म्यानमार र थाइल्याडको त्रिदेशीय फ्रेन्डसिप नयाँ एल्बमको तयारीमा जुट्ने उनी बताउँछन्।
किड्नी खोज्ने अचम्मको उपाय, यसरी फर्कियो माया मारेको जीवन
म छिट्टै नेपाल फर्कन्छु :प्रेम बानिया (भिडियो सहित )
३ पुस २०७४, सोमबार १५:१५
सञ्चारकर्मी तथा उदयमान गायक खेमराज कसको यादमा तड्पिदैछन् ? (भिडियो सहित)
४ पुस २०७४, मंगलवार २०:५२